एमाले माओवादी एकता पनि ‘सरप्राइज’ !
२०७४ पौष २३ आइतबार १४:५३:००
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माआवादी केन्द्रबीच दसैंलगत्तै ‘सरप्राइज’ तामलेल र पार्टी एकताको योजना बनेको थियो । अब पार्टी एकता पनि सोही तरिकाले नै हुने एमाले र माओवादीका नेताहरु बताउँछन् ।
एमाले स्रोतका अनुसार अहिले पनि एकताको लागि भित्रभित्रै गृहकार्य भइरहेको छ । त्यसैले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच ‘वान टु वान’ वार्ता पनि पर धकेलिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच बुधबार ‘वान टु वान’ वार्ता हुने भनिएको थियो । वार्ता हुन सकेन र अध्यक्ष प्रचण्ड बिहीबार नै चितवन लागे ।
त्यसपूर्व पनि दुई अध्यक्षबीच वार्ताको कुराकानी नचलेको होइन । तर अध्यक्ष ओलीको स्वास्थ्य प्रतिकूल देखिएर घरमै आराम गरिरहेको बताइयो । र त्यसबीचमा दुई अध्यक्षबीच संवाद हुन सकेन ।
भित्रभित्रै पाक्दैछ खिचडी !
पछिल्लो समय अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड दुई–तीन पटक ‘वान टु वान’ वार्तामा बसिसकेका छन् । ती वार्तामा एकताको मोडालिटीबारे मूलभूत छलफल भएको स्रोत बताउँछ ।
एकताकाबारेमा छलफल भए पनि त्यसबारेमा नेताहरूले धेरै कुरा बाहिर ल्याएका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम रोकेर र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन मिति लम्व्याएर सरकारले वाम गठबन्धनमा फाटो ल्याउन खोजेको एमालेको आशंका छ । कतिपय नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् ।
त्यस्तै कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्न सार्वजनिक प्रस्तावै राखेका छन् । यस्ता चलखेलबाट झस्किएको एमालेले भित्रभित्रै एकताको गृहकार्य तीव्र रुपमा अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ ।
एकताका विषयमा दुई अध्यक्षबीच सघन छलफल हुन नसके पनि दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले गृहकार्य गरिरहेको एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।
ज्ञवाली भन्छन्– एकता घोषणा पनि ‘सरप्राइज’
नेकपा एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले आइतबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड चितवनबाट स्थलमार्ग भएर काठमाडौँ आउँदै गरेकाले सोमबार दुई अध्यक्षबीच वार्ताको सम्भावना रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सोमबारै एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने तयारी छ । त्यसलगत्तै पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने दुवै पार्टीका प्रस्तावका विषयमा छलफल निकाल्ने उनले बताए ।
तथापि एकता घोषणा असोज १७ को ‘वामतालमेल’ को घोषणाजस्तै ‘सरप्राइजिङ’ हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
“नेतृत्व, योजना र नीतिगत विषयहरू छलफलका लागि तलसम्मै लैजाने कुरा पनि भएन । दुई अध्यक्षको छलफलले टुंग्याउन सक्छ,” उनको भनाइ थियो ।
आजको भोलि नै परिणाम खोज्ने र दिनसक्ने अवस्था नरहे पनि एकताका विषयमा पर्याप्त छलफल भइरहेको उनको दाबी छ ।